ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မြိတ် - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် မြိတ် - ကွန်ပျူတာ. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ တနင်္သာရီမြို့သို့သွားသော ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင် တ ..
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ တနင်္သာရီမြို့သို့သွားသော ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပြီး မြိတ်မြို့မှ ၈ မိုင် ၇ ဖာလုံခန့် ကွာဝေးသည်။ တက္ကသိုလ်၏ အကျယ်အဝန်း မှာ ၂၅.၇၁ ဧကဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မြိတ် ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြိတ်မြို့၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း အဆောက်အဦတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့၌ မြိတ်မြို့နယ်၊ စန္ဒဝတ်ကျေးရွာရှိ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်မြိတ် ကျောင်းဝင်းမြေနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရွှေဒူးကျေးရွာရှိ မြိတ်-တနင်္သာရီ ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီးဘေး သုံးထပ်ပင်မကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မြိတ်မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မြိတ်မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။